मेरो असाइलम निवेदन स्वीकृत भएको ६ महिना भयो । अहिले मेरो विवाह हुने कुरा चलिरहेको छ । मेरो हुनेवाला श्रीमतीको केही पनि भिसा छैन । उनी दुई वर्षअघि टुरिष्ट भिसामार्फत आएर त्यसै बसेकी छिन् ।
मैले असाइलमको निवेदन पेश गरेपछि पेन्डिङ अवस्थामा थियो । त्यहीबेला नेपालका लागि टीपीएस खुलेको र ज्याक्सन हाइट्सको एक सामाजिक संस्थाले निशुल्कसेवा प्रदान गरेको थियो ।
मेरो एच–१बी भिसाको स्थिति के होला ?
पेटिसन फायल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन होला ?
हाल मेरो इमिग्रेसन स्टाटस ग्रीनकार्ड होल्डर छ । मैले गत महिना मेरो श्रीमती (जो बी–२ भिजिटर भिसामा छिन्)का लागि आई–१३० पेटिसन फायल गरेको थिएँ । उनको पहिलो श्रीमान्बाट १५ वर्षको एक छोरा नेपालमा छ ।
इमिग्रेसन कोर्टलाई खबर नगरी अमेरिका छोड्न सक्छु होला ?
म ३ वर्षअघि अमेरिका प्रवेश गरेको हुँ । एक वर्षभित्रमा मित्रहरुको सहयोगबाट असाइलमको निवेदन अमेरिकी अध्यागमनमा पेश गरेको थिएँ । गत ३–४ महिना अघि अन्तरवार्ता आयो र अहिले मेरो असाइलमको निवेदनलाई इमिग्रेसन कोर्टमा पठाइदिएको छ ।
बण्डको पैसा फिर्ता लिन के गर्नुपर्छ ?
म मेक्सिको बोर्डर भएर अमेरिका प्रवेश गरेको हुँ । आइसले पक्राउ गरेपछि बण्ड तिरेर निस्केको थिएँ । टेक्सासको एक स्थानीय वकिलमार्फत बण्ड राखेको थिएँ । अहिले न्यूयोर्कको इमिग्रेसन जजले मेरो शरणार्थीको निवेदन स्वीकृत गरिदियो ।
कानूनी कुरामार्फत महत्वपूर्ण कानूनी सल्लाह सुझाव उपलब्ध गराइदिनुभएकोमा विश्वसन्देश टिमलाई धेरैधेरै धन्यवाद । मैले लगभग ६ महिना अगाडि ग्रीनकार्ड होल्डरको नाताले मेरो श्रीमती (जो बी–२ भिजिटर भिसामा थिइन्)का लागि आई–१३० पेटिसन फायल गरेको थिएँ ।
टीपीएसको म्याद सकिए नेपाल फर्किनुपर्छ ?
मैले असाइलमको निवेदन पेश गरेपछि पेन्डिङ अवस्थामा थियो । त्यही बेला नेपालका लागि टीपीएस खुलेको र ज्याक्सन हाइट्सको एक सामाजिक संस्थाले निशुल्क सेवा प्रदान गरेको थियो ।
भिसा एक्सटेन्सन गर्ने विचारमा छु
म नेपालबाट ३ महिनाअघि बी–२ भिसामा अमेरिका आएको हुँ । ५ वर्षको भिसा दिएको छ । मेरो यो अमेरिका भ्रमण पहिलो पटक हो ।
मेरो छोराछोरीहरु योग्य छन् ?
मैले भर्खरै युएस सिटिजनसिप प्राप्त गरेकी छु । मेरो श्रीमान्को ग्रीनकार्ड नै छ । हाम्रा दुई बच्चाहरु १२ र १४ वर्षका ग्रीनकार्ड होल्डर नै छन् ।
म सधैं विश्वसन्देशमा प्रकाशित कानूनी स्तम्भ पढ्ने गर्छु । यसरी नेपाली समाजलाई निशुल्क कानूनी सल्लाह दिनुभएकोमा रमेश श्रेष्ठ र यस पत्रिकालाई हृदयबाट नै धन्यवाद दिन चाहन्छु । यसपटक मेरो आफ्नै जिज्ञासा भएकाले तपाईंलाई यो प्रश्न राख्दै छु । म सन् २०१० मा नेपालबाट बी–२ भिसा लिएर आएको थिएँ । ६ महिनाको बी–२ भिसा सिद्धिएपछि मैले त्यसै अमेरिकामा बसोबास गरिरहें । मैले कुनै पनि निवेदन पेश गरेको छैन ।
पहल गरे टीपीएस नवीकरण सम्भव छ
नेपालमा भूकम्प गएपश्चात् अमेरिकी सरकारले नेपालीका लागि टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) उपलब्ध गराएको छ । ३ वर्षअघि जुनमा उपलब्ध यो सुविधाका कारण धेरै नेपालीले लाभ लिएका छन् । स्थायी रुपमा बसोवास गर्ने अनुमति नभएका र कानुनी रुपमा काम गर्ने अवसर नपाउनेका लागि यो सुविधा महत्वपूर्ण अवसरको रुपमा रहेको छ । यही सुविधाको उपयोग गर्दै लामो समयदेखि देश जान नपाएका सयौं नेपाली देश गएर अमेरिका फर्कन सकेका छन् ।